Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » मर्निङ वा इभिनिङ वाकमा निस्किए पनि कारबाही
मर्निङ वा इभिनिङ वाकमा निस्किए पनि कारबाही
काठमाडौं, भदौ ३ । काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँ बिहिबारदेखि मर्निङ वा इभिनिङ वाक या अरु कुनै अत्यावश्यक नभएको काममा निस्कँदै हुनुहुन्छ ? एकै छिन त हो, त्यहीँपर पुगेर आईहाल्छु नि भन्ने सोचमा निस्कने सोच बनाउनुभएको छ ? यदी त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ कारवाहीमा पर्न सक्नुहुन्छ।
आज बुधबार रातिदेखि एक साता लागु हुने नि षेधाज्ञाको आदेशअनुसार यसपटक भने प्रहरीले अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा निकै कडाई गर्नेछ। मान्छेहरु चोक-चोक बरालिने गतिविधि बढेको भन्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने ‘मर्निङ वा इभिनिङ वाक जान्छु भन्ने सोचेर ननिस्किनुहोस्, सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार का रवाही हुन्छ पहिले जस्तो एकपल्ट भनेर छाडिदैन ।
उक्त ऐनमा आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर एक महिनासम्म कैद वा र १०० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै यो ऐनअन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई छ महिनासम्म कै’द वा र ६०० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै स’जाय हुने व्यवस्था छ।
विगतका दिनहरु भन्दा अहिले को रोनाको स ङ्क्रमण फैलिँदै गएका र विशेषगरि काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरी प्रशासनले यसअघि लकडाउनमा अपनाइएको सहजीकरण समेत यसपाली हुने छैन।
विगतमा पास, कार्डको दुरुपयोग गरिएपछि यसपालि कुनै सवारीसाधन पाससमेत जारी गरिएको छैन, पास वा कार्ड भएकाहरुलाई समेत कडाइ गरिनेछ । त्यसैले ल’कडाउन भन्दा बुधबार राति १२:०० बजेदेखि लागु हुने नि षेधाज्ञाको आदेश थप कडा हुने काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।